Yakajairwa uye Maitiro-G STAR ZVOKUTENGA ZVAKAITWA
Imba>Nezvedu>Standard uye Maitiro
Simba rakasimba rinogara rakatangira kubva mukati memukati yakasimba.
• Kuwedzera Kukwikwidzana Kwevatengi
Vatengi ndiyo kiyi yekubudirira kwedu. Isu tinogovana zvatinoona nevatengi vedu uye nekupa mhinduro dzakazara kwavari kuti vabudirire zvinangwa zvavo nenzira kwayo.
Innovation Inotungamira Kune Ramangwana
• Enhance Company Value
Isu tinogadzira kukura kunobatsira kuve nechokwadi chebudiriro nekusimudzira yedu yakaenzana bhizinesi portfolio. Isu tinovavarira kukwana uye kuteedzera kugona.
• Ziva Kurota kweVashandi
Vashandi vakatanhamara ndiyo hwaro hwebudiriro yekambani yedu. Yedu yekambani tsika inozivikanwa nekusimba, kujekesa uye kuremekedzana. Tinokurudzira vashandi vedu kutora muridzi uye kukura pamwechete nekambani.
• Gamuchira Mutoro Wemagariro
Isu tiri kuita kusimudzira mashandiro ehupfumi hwevanhu kuburikidza nekuvandudza, mazano uye hunyanzvi hwehunyanzvi. Isu takazvipira kune zvakasarudzika tsika, hukama hwakanaka hwehukama uye nharaunda ine hutano. Kuvimbika kunotungamira maitiro edu kune vedu vashandi, vatinoshanda navo bhizinesi uye vagovani.
Unhu Hwemutemo: Passion Yekunaka
• Zero Kushivirira Kukanganisa
Zviitwa zvedu zvakanangiswa kune kwakasimba kudzivisa chero kukundikana mune zvigadzirwa zvedu nemaitiro. Isu tinofunga Zero Kukanganisa seicho chaicho chinangwa. Isu tinotsigira iko kugadzirisa kwakarongeka kwezvigadzirwa uye maitiro.
• Kugutsikana kweVatengi
Mabasa edu anotariswa nevatengi uye isu takazvipira kukudziridza kudyidzana kunobudirira kubva pakutanga, kubva pakushandisa inoshanda projekiti uye kugadzirisa manejimendi kune huwandu hwehuwandu, zvese mukati mehupenyu hwese
• Kuenderera Mberi Kuvandudza
Nheyo yedu mubhizinesi ndeyekuenderera mberi nekuvandudza kukwikwidza kwedu. Kuve ne-yakadzika midzi-chikonzero ongororo nekushandisa PDCA uye Six Sigma mhando maturusi, nekukurumidza uye kwakarongeka kugadzirisa kune chigadzirwa uye maitiro, maitiro akanakisa kugovana pamwe nehunyanzvi hwaro hwaro hwekuwedzera mhando uye kugadzirwa.
• Tinokurudzira mweya webhizimusi, kupa masimba uye kubatirira vashandi vedu nekuvandudza nekuronga nekushandisa ruzivo rwavo, ruzivo uye hunyanzvi.
• Yemamiriro ekunze, Ezekuchengetedza Hutano uye Chengetedzo
• Isu takanangana nevimbiso yedu ine hushamwari, tichiteerera zviri pamutemo nezvimwe zvinodiwa, uye tichigadzira nzvimbo yebasa yakachengeteka uye ine hutano kune vese vashandi nguva dzose.
Kuvimbisa nzvimbo yakachengeteka inoshanda, yakavimbika uye inovimbika.